ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရှ်ကို မှောက်အောင် ထိုးသွားမယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်းကြုံးဝါး
February 29, 2020 Alinn Pya Comments Off on ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရှ်ကို မှောက်အောင် ထိုးသွားမယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်းကြုံးဝါး
ပရိသတ်ကြီးရေ လာမယ့် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရှ်တို့ရဲ့ ONE Championship ပွဲစဉ်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ…. အောင်လအန်ဆန်းဟာ ဝိတ်တန်း ၂ ခုရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ခုသူ့ရဲ့ သူ့ရဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံဘွဲ့ကို ဘစ်ဒက်ရှ်က စိန်ခေါ်တာကြောင့် ကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ထိုးသတ်ရတော့မှာပါ…… South China Morning Post ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အောင်လအန်ဆန်းဟာ ပြိုင်ဘက်ကို […]
February 24, 2020 Alinn Pya Comments Off on ပြိုင်ဘက်အိန္ဒိယကစားသမားကို အနိုင်ယူကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ဆုတစ်ခု ထပ်မံရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ
၂၀၂၀ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတကာစီးရီးကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်(၆၁)ရှိ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက်မယ် သက်ထားသူဇာက ကမ္ဘာ့အဆင့်(၁၂၃)ရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံသူ Aakarshi Kashyap ကို (၂၁-၁၄) (၁၆-၂၁) (၂၁-၁၈)နဲ့ နှစ်ပွဲ-တစ်ပွဲ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သက်ထားသူဇာဟာ ချန်ပီယံဆုကြေးငွေအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပမယ့် Future Series ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်နိုင်ရေးအတွက် ကင်ညာနိုင်ငံကို ဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Congratulations ! […]